I Mmathethe dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 078. Ny laharam-pokontaniny dia 45. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmathubudukwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 203. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia -24.6 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.433333.
I Mmatseta dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 474. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmatshumo dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 122. Ny laharam-pokontaniny dia 39. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmeya dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 752. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmopane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 15 450. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mmutlana dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 854. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia -23.043789 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.580149.
I Mochudi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 44 815. Ny laharam-pokontaniny dia 88. Ny laharam-pehintaniny dia -24.416667 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.15.
I Modipane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 197. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Moeng dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 11. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mogapi dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 939. Ny laharam-pokontaniny dia 17. Ny laharam-pehintaniny dia -22.323012 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.834923.
I Mogapinyana dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 528. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -22.371145 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.585755.
I Mogobane dia tanàna iray ao aminny distrikani South East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 400. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia -24.984183 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.696906.
I Mogoditshane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 58 079. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia -24.626944 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.865556.
I Mogojogojo dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 619. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mogome dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 540. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -22.784429 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.899998.
I Mogomotho dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 843. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mogonono dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 349. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -24.289975 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.309815.
I Mogonye dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 577. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -24.82524 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.709648.
I Mogorosi dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 716. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -22.438689 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.565317.
I Mogwalale dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 305. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -25.455245 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.381365.
I Mohembo East dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 550. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -18.3 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.8.
I Mohembo West dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 770. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia -18.3 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.8.
I Moiyabana dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 571. Ny laharam-pokontaniny dia 150. Ny laharam-pehintaniny dia -22.631796 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.404486.
I Mokatako dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 018. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia -25.754929 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.220609.
I Mokgacha dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 354. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -23.49121 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.97867.
I Mokgenene dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 835. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mokgomane dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 708. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia -25.554424 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.243202.
I Mokgware dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 334. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -22.769789 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.796041.
I Mokhomba dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 959. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mokhungwana dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 260. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mokobeng dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 535. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -22.996373 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.667659.
I Mokoboxane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 594. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mokokwana dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 356. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mokolodi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 624. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -24.696111 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.801111.
I Mokoswane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 556. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -21.728335 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.60946.
I Mokubilo dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 917. Ny laharam-pokontaniny dia 21. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Molalatau dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 396. Ny laharam-pokontaniny dia 19. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Molapowabojang dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 7 520. Ny laharam-pokontaniny dia 20. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Molepolole dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 66 466. Ny laharam-pokontaniny dia 94. Ny laharam-pehintaniny dia -24.406587 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.495079.
I Molete dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 331. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -22.889214 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.51945.
I Moletemane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 664. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Monong dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 267. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Monwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 513. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Mookane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 983. Ny laharam-pokontaniny dia 22. Ny laharam-pehintaniny dia -23.688051 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.659478.
I Mopipi dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 912. Ny laharam-pokontaniny dia 76. Ny laharam-pehintaniny dia -21.183333 ary ny laharan-jarahasiny dia 24.883333.
I Moralane dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 866. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Moremi dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 597. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia -22.572341 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.450583.
I Moreomabele dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 602. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Moreomaoto dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 518. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.